मैनीक्योर संयुक्त - यो आधुनिक महिला को विकल्प
एक मैनीक्योर प्रदर्शन गर्न एक सना भ्रमण गर्नु अघि, तपाईंले यसको कार्यान्वयन आज जो प्रविधी अवस्थित जान्नु आवश्यक, नतिजा प्राप्त गर्न मनमोहक हुनेछ के ठीक थाहा। मैनीक्योर र यसको कार्यान्वयन को प्रविधी को विषय मा लोकप्रिय लेख, साथै फोटो को परिणाम थाह बन्न रूपमा पढेर, तपाईं यसलाई म अन्ततः प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भनेर के निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रक्रियाहरु धेरै प्रकार हो, र आजको लोकप्रिय मध्ये एक मैनीक्योर संयुक्त छ।
जसमा धेरै प्रक्रियाहरु जोडती मैनीक्योर को प्रविधी, - संयुक्त मैनीक्योर। यस मामला मा, यो दृष्टिकोण को मुख्य लाभ प्रत्येक ग्राहकको लागि आवश्यक प्रक्रिया अलग-अलग विकल्प को संभावना छ। मैनीक्योर कम्बो निम्न कदम कार्य गर्दछ।
मैनीक्योर संयुक्त - तयारी
यो उपचार पोलिस गर्न तयार कुनै पनि तरिकामा कि समान छ नङ हेरविचार। पहिलो, तपाईंले राम्ररी धुन र आफ्नो हात सुक्खामा आवश्यक छ। त्यसपछि तपाईं नङ पालिस रिमुभर प्रयोग गरेर पुरानो नङ पालिस को remnants हटाउन आवश्यक छ। यस मामला मा यो नङ प्लेट को सतह searing, एसिटोन समावेश छैन भनेर यौगिकों प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। अर्को छ एक, बलियो नङ लागि ट्रे को नङ थप प्रशोधनका लागि नरम र थप पहुँचयोग्य वरिपरि छाला बनाउन मद्दत गर्नेछ हर्बल अर्क, आवश्यक तेल र खनिज पूरक थप्न महत्त्वपूर्ण छ जो संरचना।
को नङ र cuticle वरिपरि छाला हेरविचार
अर्को चरण मरेका छाला तहहरू विशेष उपकरण को मद्दतले गर्न सकिन्छ कि हटाउन, र त्यसपछि लागि आदर्श तरल पदार्थ गर्न परिणाम ल्याउन छ मैनीक्योर edging। okolonogtevogo राम्रो त्यसपछि गठन र यो एक गोलो आकार दिने, तपाईं दिएर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ आकार नङ। को नङ निकै कमजोर छ भने, थप नरम उपकरण प्रयोग गरिनुपर्छ। यो चरण मा, हार्डवेयर पनि मैनीक्योर को कार्यरत प्रविधी हुन सक्छ। तपाईं छाला को अवस्था अनुमति भने, सींग अवशेष हटाउने मैनीक्योर लागि विशेष उपकरण प्रयोग गरिन्छ। को कम्बो हार्डवेयर मैनीक्योर को नङ चोट जोगिन गर्न मात्र एक योग्य टेक्नीसियन द्वारा बाहिर पर्छ भनेर नबिर्सनुहोस्। तसर्थ, त्यहाँ विशेषज्ञ को योग्यता मा कुनै विश्वास छ भने, यो आवश्यक नङ हेरविचार अन्य प्रकार प्रयोग गर्न छ।
हेरविचार नङ प्लेट
सावधानीहरु नियालेर गर्दा तिनले नङ को सतह पलिश छ। पातलो नङ पालिस नरम पक्ष चमकाने काटन कार्य, अधिक कडे र कुनै न कुनै एक थप कठोर भाग संग पङ्क्तिबद्ध गर्न सकिन्छ। तपाईं नङ वा यसलाई पातलो बिगार्न सक्दैन। यसलाई विशेष प्रयोग गर्न सम्भव पनि छ एक मैनीक्योर लागि मिसिन, तर केवल नङ र छाला को अवस्था यसको लागि कुनै contraindications छ भने। एक पटक सबै तीन प्रिपेरेटरी चरण तपाईं नङ, पूर्व-सफा हात को डिजाइन सीधा जानुहोस् र नङ र राम्रो अवशोषण लागि वरिपरि तिनीहरूलाई पौष्टिक सुदृढ तरल सानो मालिश छाला कवर गर्न सक्छन्, बाहिर।
को नङ माथिको प्रक्रियाहरु सबै पास गरेपछि, तपाईं रंग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। नियम, डिजाइन को विविधता देखि अक्सर चयन फ्रान्सेली मैनीक्योर, नङ डिजाइन को यस प्रकार दैनिक जीवनमा साथै दल लागि दुवै, प्रायजसो फिट देखि। तर तपाईं साँझ लागि राम्रो मैनीक्योर बनाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले डिजाइन को सामान्य प्रकार को एक चयन गर्न सक्नुहुन्छ: अंग्रेजी (दुई रंग staining प्रविधी), चिनियाँ (दुई रंग कोटिंग ढाँचा को आवेदन पछि), स्पेनी (यस मामला मा नङ ढाकेका छन् मत्ती वार्निश धनी गहिरो रंग संग) । कुनै पनि मामला मा, नङ मा लाह आवेदन गर्नु अघि काम सबै विवरण मा सहमत गर्न आवश्यक छ।
सही प्रक्रिया कसरी चयन गर्न
मास्टर, मैनीक्योर, अक्सर जसको लागि ग्राहक को नङ को सबैभन्दा उपयुक्त शैली चयन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो काम, को परिणाम तस्बिरहरू बनाउन। तसर्थ, सैलून आउने एक संयुक्त मैनीक्योर बनाउन, नङ फोटो, काम को एक परिणाम रूपमा प्राप्त जुन अवलोकन गर्न सकिन्छ पूर्व उहाँले हासिल गर्नुपर्छ परिणाम के स्पष्ट बुझे मास्टर प्रक्रिया गर्न।
मैनीक्योर गरिरहेको, मिति यसको प्रदर्शन को एक संयुक्त विधि, ग्राहकहरु को बहुमत सैलून छनोट। निश्चय साथ भन्न सक्छौं यस्तो मैनीक्योर कि - आधुनिक स्त्रीको छनोट। तर, सबै माथि, चयन गरिएको प्रविधी को कुनै पनि मुख्य आवश्यकता अनुरूप चल्नै पर्छ - आफ्नो नङ हानी छैन। अर्को प्रक्रिया को लागि चयन गरेर, नङ हेरविचार को एक निश्चित प्रकारको, सल्लाह र विशेषज्ञहरु को सिफारिसहरू द्वारा मात्र तिनीहरूले सही नङ अवस्था आकलन र हात भव्य देख्यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया सिफारिश गर्न सक्छन् देखि निर्देशित गर्नुपर्छ।
नयाँ फेशन प्रवृत्ति: फर मैनीक्योर
ल्याक "सैली Hansen": सैलून मैनीक्योर (पैलेट)
कसरी नतिजा बिना घरमा जेल नङ हटाउन?
सुशील र स्टाइलिश नङ: फोटो डिजाइन
एकल-चरण जेल नेल "toffee": प्यालेट र समीक्षा
नङ जेल लागि नङ एक्रिलिक पाउडर बलियो: प्रक्रिया को विवरण
हतियार को सर्बिया कोट: इतिहास र अर्थ
संगीत को Timbre - यो वर्ग को लागि हो? किन अवस्थित?
पेटलाई तर्नुको लागि पोष्टपैठ पछाडि
वर्ण Milina - Mortal Kombat
Tommen Baratheon - वयस्क को हात मा एक मोहरा!
मार्केटिङ दृढ बुधवार।
स्केयरक्रो हात ल्याउन - आफैलाई र छोराछोरीलाई एक छुट्टी दिन!
तपाईंको हातले फोटोहरूको लागि फ्रेमहरू
L'Oreal देखि रंग को प्यालेट - कास्टिंग क्रीम चमक
मोटरसाइकल "यामाहा" शुरुआती र पेशेवरहरुको लागि